Asa raha diso ny vaovao azon’ireo satria amin’ny fijery tsy miangatra dia miendrika fibaikona ny sehatry ny fitsaràna ny zava-nitranga. Nomena baiko avy hatrany ny minisitry ny fitsaràna ny mba hanafaka izay olona metimety tamin’ny filoha ny famoahana azy ary izany dia tsy misy an-kijery dosie. Fitsabahana andraikitra toy izany na koa ny fitsabahan’ny rafitra mpanatanteraka amin’ny rafitra fitsaràna dia loza mitatao ho an’ny firenena demokratika.
MPANEFOEFO AKAIKIN”NY FITONDRANA
Mazava tanteraka ny baolina ankehitriny, mahakasika ireny tsy fisian’ny solika teto amintsika ireny. Ny fanapahan-kevitry ny governemanta ny nanome alalana ny State Procurement of Madagascar na SPM dia mazava fa bizna lehibe ho an’ny mpanefoefo akaiky ny fitondram-panjakana. Efa navoakan’ny gazety vahiny efa ela ihany ny momba io fanafarana solika ataon’ny fanjakana manokana io saingy izay vao voamarina. Hailika amin’izay izany ny mpandraharahan’ny solika eto amintsika. Ahiana hiteraka zava-doza izany satria raha migafy ireo dia hiverimberina indray ny tsy fisian’ny solika.
FANAFIHANA ENY TSIAFAHY
Mitohy ihany ny fanafihana mitam-piadiana izay mampihorohoro ny tanànan’Ambalavao, etsy Tsiafahy. Omaly indray dia nisy tokantrano izay voatafika tamin’ny basim-borona sy antsy ary lasa tamin’izany ny vola fiandry izay mba nampirimina tao an-trano. Lasan’ireo olon-dratsy hatramin’ny peratra mariazy sy ny kojakojan-tokantrano maro. Mitaraina ny olona ankehitriny satria misesy loatra ny fanafihan-jiolahy ary tsy misy mba misy ny voasambotra nefa misokatra hatrany ny fanadihadiana.
Ahiana hiteraka fahavoazana ara-bola lehibe ho an’ny firenena ny fanakatonana ny Base Toliara. Ny antony dia handoa lamandy an-tapitrisany dolara isika manoloana an’izany. Misy làlana mifehy ny momba ny orinasa misahana fitrandrahana harena an-kibon’ny tany toa ireny fa tsy azo atao di-doha toa izay mitranga. Dia aiza indray ny vola hanentsemana an’izany kanefa ny lamandin’ny Air Mad sy ny orinasam-panjakana maro aza tsy hita izay hanaovana azy. Misy fanapahan-kevitra izay tsy nisainana mihitsy indraindray ataon’ity fitondràna ity.